Tenis agbapụ igwe
Mmeghachi Omume Ọzụzụ
Racket Eriri igwe
Egwuregwu Ọzụzụ Football
Egwuregwu Volleyball Training
Isiokwu Tenis Agbapụ Robot
Badminton Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ
Nkata Igwe Nkata
Buyzụta igwe ịgba bọọlụ nwere ike ịgba tenis nwere ike nyere gị aka ịkụ tenis?
Ndị na-egwu egwuregwu Tenis na-eche mgbe niile banyere otu esi emeziwanye nka ha. Igwe ọzụzụ Tenis ga-abụ ezigbo ndị mmekọ ọzụzụ maka ha idozi nsogbu a. Anyị na-egosi ụfọdụ uru dị n'iji igwe bọọlụ bọọlụ tennis dị n'okpuru maka re. Uru dị na iji igwe bọọlụ bọọlụ tennis: 1. Nye onyinye t ...
Soro na Seminar Nhazi nke Tenlọ Ọrụ Tennis Tennis Na-abanye Na Campus
site ha na 21-07-15
Site na July 16th ruo July 18, China Tennis Association nke obere tennis na-abanye na seminar nke seminarị nke China Tennis Association Tanis Sports Development Center haziri na Yantai, Shandong Province. Wan Hou, Onye isi oche nke Siboasi Maazị Quan duru ndị otu nyocha ...
Nkata agbapụ igwe N'ogbe
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta igwe ọzụzụ basketball ma ọ bụ na-azụ ahịa maka ya, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara maka ịmị na ire igwe bọọlụ basketball nwere ọgụgụ isi dị elu maka afọ ndị gaferela. Na Ọzụzụ basketball igwe Market ...
Kedu ụdị ị kwadoro nke kachasị maka igwe bọọlụ tenis?
site ha na 21-07-03
E nwere ụdị dị iche iche n'ahịa maka ịkụ bọọlụ ịkụ tenis, akara ọ bụla nwere uru nke ya, enweghị ike ịsị nke dị njọ, nke kachasị mma, mana ọ nwere ike ikwu ma ọ ga-egbo mkpa gị, mgbe ahụ akara ahụ kacha mma maka gị. Taa ebe a kwadoro gị akara SIBOASI maka tennis automati ...
Igwe egwuregwu ịkụ tennis nwere ọgụgụ isi na tennis campus
Tenis bụ egwuregwu na-ejikọ mma, ejiji, na ahụike. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ nke ime ka ahụ dị ike, mana ọdịbendị ọdịnala ya nke mmepeanya, ịkpa ezi agwa na ụdị nwa nwoke na-emekwa ka echiche egwuregwu dị mma nke ndị mmadụ na-esonye n'egwuregwu a oge niile, Ọbụna ideol ...
Uru nke igwe SIBOASI basketball basketball
Nnukwu uru dị iche iche nke bọọlụ basketball bọọlụ bọọlụ Siboasi ma e jiri ya tụnyere igwe mbugharị basketball ndị mba ọzọ: Nke mbu, ọ ga-amasị m iwebata gị ụlọ ọrụ Siboasi: Siboasi guzobere na 2006, nke dị na DongGuan, GuangDong, China, na -emepụta ma na-ere igwe dị ka Tenni. ..
Okwu Mmalite nke Tenis Ball Machine
site ha na 21-06-18
A. Ọrụ nke bọọlụ bọọlụ tenis 1. can nwere ike iji aka ike ịtọ ma gbanwee ọsọ ọsọ dị iche iche, frequencies, ntuziaka, dobe isi, ma na-atụgharị maka ọzụzụ ọnọdụ jikọtara. 2. A na-akwụsị ike iji rụọ ọrụ ntanetị iji chekwaa ike mgbe ị na-eburu bọl ahụ, a ga-etinyekwa akara ntanetị n'ime po ...
Uru na ọrụ nke basketball rebounding igwe
site ha na 21-06-11
Ọ bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị na-eji igwe na-agba bọmbụ baseball maka ọzụzụ: 1. Gbanwee ụdị agbapụ ma melite arc 2. Zụlite nkwụsi ike nke ịtụfu n'efu ma melite ọnụego kụrụ ọnụ 3. Na-akụzi okwu were were na izi ezi nke ijide ma gbapụ na ọnọdụ ọ bụla 4. Ọzụzụ na-agba ọsọ ma na-agafe agafe ...
Kedu ụdị egwuregwu bọọlụ bọọlụ kacha mma?
Kedu ụdị egwuregwu tenis ka mma? E nwere ọtụtụ ụdị maka igwe ịkụ tenis bọọlụ na Ahịa, ndị ahịa amaghị nke ọ bụla kwesịrị ekwesị ịhọrọ, akara dị iche iche nwere uru ya na ọghọm ya, ebe a na-egosi ihe gbasara siboasi brand tennis na-eje ozi igwe S4015 model fo ...
Ahụmahụ nyocha nke siboasi basketball rebounding igwe na badminton ọzụzụ igwe
A kọọrọ na kọleji na mahadum ndị America nwere igwe eji agba bọọlụ nwere ọgụgụ isi. Agbanyeghị na ụlọ akwụkwọ ndị China anaghị ahụkarị igwe bọọlụ, ha nwere obi ụtọ na ụlọ ọrụ R&D na teknụzụ patented nke nwere ọgụgụ isi basketball ọzụzụ na-achịkwa ...
Nkọwa nke Siboasi T1600 na Spinfire Pro2
site ha na 21-05-28
Siboasi T1600 igwe egwuregwu bọọlụ bọọlụ bụ igwe ọhụụ kachasị ọhụrụ ewepụtara n'afọ 2020: Site na foto dị n'elu, ị ga - ahụ na Logo dị iche na Siboasi ụdị ndị ọzọ, LOGO dị na ọla edo maka ụdị a, ọ na - eme ka ọ dị elu mezuo otu. Ọ ghọrọ onye na-ere ahịa nke abụọ mgbe ọ malitere ...
Kedu otu esi eme tenis na-eje ozi n'ụzọ ziri ezi na ngwa ngwa?
Ekwuru na ije ozi bụ akụkụ kachasị mkpa nke teknụzụ tennis. Echere m na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụ isiokwu a nwere mmegide ọ bụla. Na asọmpi ọkachamara, a ga-enwe spometa na-eje ozi. Ọsọ 200km / h maka ndị egwuregwu nwoke nwere ike ibute nghọtahie. Ndị na-egwu egwu na-achọkarị ...